Musharax Saciid Deni oo si wayn loogu soo dhaweeyay London
LONDON, UK - Siyaasiga Siciid Cabdullaahi Deni, oo ah Murashax Madaxweyne doorashadda Puntland ee 2019, ayaa gaaray magaaladda London ee caasimada UK , halkaasoo si diiran loogu soo dhaweeyay.
Qeybaha kala duwan ee Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool caasimada dalka Ingiriiska ayaa ka qeyb-galay soo dhaweynta musharaxa, sheegay inay ku farax-san yihiin inuu kusoo booqdo wadanka Britain.
Deni ayaa lagu wadaa inuu kulan la qaato Jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK, iyadoo habeenka soo socda ee Jimcaha la qaban doono munaasabad wayn, taasi oo uu ka jeedin doono khudbad uu uga hadli doono xaaladda dalka guud ahaan, gaar ahaan Puntland.
Murashax Deni oo ah Ganacsadde iyo siyaasi Soomaaliyeed oo xilal kala duwan dalka kasoo qabtay, ayaa waxuu kamid ahaa shaqsiyaadkii isku soo taagay doorashadii madaxweyne, uu kusoo baxay Farmaajo Febuary, 2017-dii.
Si kastaba, Doorashada Puntland ee 2019-ka, ayaa waxaa ku tartamaya siyaasiyiin kala duwan kuwasoo qaar horey u shaaciyay musharaxnimadooda, halka qaar kale la filayo bilaha soo socda iney ku dhawaaqaan, waxayna leedahay xiiso gaar ah madaama Madaxweynaha hada haya talada Cabdiweli Gaas uu sheegayo inuusan sharaxneyn, balse wararka ay xusayaan inuu tartamayo.
Puntland Focus Group ayaa sheegtay in go'aanka Baarlamaanka uu yahay mid kusoo beegmay...
Xaqiiqda Dhabta ah ee Doorashada Puntland 2019
Fikradaha 02.03.2018. 13:07
Mudo Korarsi uu sameeyo Madaxweyne Gaas oo laga digay
Puntland 27.02.2018. 13:49